Oka-Singh uthe, uyakholwa ukuthi lomsbenzi uzogqugquzela nabany’abafundi ukuthi balandele kulo mkhakha. Ukhulume ngokubaluleka kanye neqhaza lo mkhakha ongahlinzeka ngawo izisombululo kumhlaba onezinkinga. USingh ube nokuzithoba okukhulu ngesikhathi ekhuluma ngempumelelo yakhe. Ebeka nokuthi lokhu kuseyisiqalo nje, futhi uyafisa ukubona ucwaningo olufuze lolu ludlondlobala kulo mkhakha, ukuze kuthuthukiswe phambili amasu kanye namacebo okusebenza ahlanganisa ezemvelo.
Useqale ukusebenza eHhovisi le-Surveyor General eMgungundlovu, okaSingh uyakholwa ukuthi uzoqhubekela phambili nocwaningo lwakhe aze afinyelele kwi ziqu zobudokotela aze adlondlobale abe umcwaningi wengomuso.
UDkt Mulemwa Akombelwa, inhloko yomnyango we-Land Surveying e-UKZN, kwiSikole sobuNjiniyela, uthe, impumelelo kaSingh ithathe igxathu elibalulekile kakhulu, futhi uyathemba ukuthi kuleminyaka ezayo lo mnyango uzoba nekusasa eliqhakazile. Uncome oka-Singh wamhalalisela kakhulu ngempumelelo yakhe.